Madaxweynaha Puntland oo Garoowe soo gaarey iyo qodobo horyaal.
May 31, 2021 Xuseen 8
Puntlandtimes (Garoowe)-Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa ku wajahan magaalada Kismaayo ee xarunta u ah xilligaan maamulka Jubbaland kadib muddo uu ku sugnaa Muqdisho.
Siciid Cabdullaahi Deni oo muddo ku sugnaa Muqdisho waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenkiisa, xubno katirsan golayaasha kala duwan ee dowladda Puntland iyo qaar kamid ah shacabka Garoowe.
Madaxweyne Siciid Cabdullaahi ayaa waxa uu Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaga qaybgalay shirkii lagu saxiixay heshiiska doorashada ee ka dhacay teendhada Afisiyooni, iyaga oo sidoo kale la kulmay madax kala duwan.
Madaxweyne Deni ayaa waxa uu si rasmi ah u guda geli doonaa arrimaha doorashada gaar ahaan wax ka beddelka xubno ka tirsan guddiyada doorashooyinka heer Federaal oo cabasho ka timid.
Kii yaraa ee huuraale gaylan ma khalki khalkii faraamo baa ku dhacay, waakan isku dhec yaacay, ee kala garanla Garoowe iyo kismaayo
@Nimo kkk waa oo Gaylan intii aabihii ini fargaajo lasoo afjarayba waan ku haynay wareerka iyo isku dhex yaaca.
Suldaan Ahmed Shiine maanta waan kucaleemasaaray saaxiib, salaan diirranna hawada ayaan kuusoomarinayaa.
Siciid Deni socdaalkiisa Jubbaland wuxuu salka kuhayaa olole ay Puntland iskugu maslaxeynayso beelaha Soomaaliyeed ee geyigaas iyo ismaamulkiisaba markii hore iskubaheystay laakiinse ay Farmaajo iyo qabqableyaashii caqliga kaxaday fidnada kadhex abuureen.
Waxaa jirta xaqiiqadoo aan jecelahay inaan Soomaalida xusuusiyo, waxaana weeye in haddii aysan sooyaalkeenna iyo issimadeenna/culimadeenna xalaasha ah ahayn aynaan maalinkan maanta ah jirneen (Rabbi sokadii). Waxaan marag-maddoonto ahayn in waxa khilaafyo, dirir, iyo xurgufyo kasta ee beelaheenna Soomaaliyeed iskuceebeeya uu Rabbi maslaxo ugayeelo issimadeenna iyo culimadeenna xalaasha ah oo marjaca kamadambeyska ah inoo ah.
Yaa iisheegi kara hal dhibaato oo beelaha Soomaaliyeed kala-dhexmartay oo ay ama siyaasaddu mise siyaasiyiintu xalliyeen?
Xaqiiqada aan nalka ku ifinayaa waxay tahay inuu sooyaalkeennu weli yahay rugta iyo tiirarka dhabta ah ee ay bulshadeennu ku-dulqotonto iyo xabaqda iskuhaysa. Sooyaalkeenuna waa mid asal-ahaan iyo guud-ahaanba Hannaanka Islaamiga salka kuhaya, issimada iyo culimada xalaasha ahna waa hoggaanka asalka ee sooyaalkaas guddoonka, garhaya, gabboodda, iyo gaashaankaba u ah.
Haddaba, waxaa halkaa noogacad inaynaan sooyaalkeenna iyo hoggaan-dhaqameedkeenna sina ugamaarmi karin xataa marka ay xaajo siyaasadda cilmaaniga gaadho; waa labadan marjaca kamadambeyska ah. Haddiiba ay xaqiiqadu sidan tahay, waxay ahayd inaynu garanno inaysan nagafursan doonin inaynu nadaamkeenna siyaasadda iyo dawligana isla sooyaalkeenna kusaleyno oo kayeelaalanno – kadibna iskudhaqno.
Waxaana marag-maddoonto ah in waxa khilaafyo, dirir, iyo xurgufyo ee beelaheenna Soomaaliyeed iskuceebeeya uu Rabbi maslaxo ugayeelo issimadeenna iyo culimadeenna xalaasha ah oo marjaca kamadambeyska ah inoo ah.
ASC wariyuhu waxa uu qoro waa in uu helaa tafatirire laakiin kuwaan waa NAFTA DOOJI MA AHANE XARAGO LAGA DAWAAREE sxb waanu ku soo boqanaa ha nagu qasbin in aan kaa cararno ee isku day beenta aad qorayso xataa in aad is waafijiso SCW
Bintigirl.. oo ciise riyoole gorowe ku soo dhaweeyay..
1- Awlal taariikdo waa qarnigii 21 aad,ee ma aha xiligii bidaa’iga ee banisadamko ka soo gubay.war inyar xitaa,eeg horumar ka maantay dunida ku talaabsatay.
Hab beeleed uyo kaabo qabiil haddii horumar lago gaaraayo,Yemen iyo Soomaaliya ayaa dunida ugo horayn lahaa,xag walba.
2-Shaqsiga kale ee wax lago sheego aanan garanayn waa,mid la baxay
MUBARIK YUSUF war dadka geyiga Puntland ee sharafta iyo ka dhex bax,oo minankiina ayaa kuu baahan ee aad,oo ah deefaanka dhexe ee Gobolada waqooyi ee Soomaaliya,anshax iyo edabna,ma lihid duf ku bax.